အဲဒီအချိန်မှာ ကလေးကအရမ်းလည်းနာကျင်၊ ကြောက်လည်းကြောက်ပြီး ငိုနေခဲ့တယ် – Nyang Media
အဲဒီအချိန်မှာ ကလေးကအရမ်းလည်းနာကျင်၊ ကြောက်လည်းကြောက်ပြီး ငိုနေခဲ့တယ်
LASW /TWO အဖွဲ့ ၏ လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးမှူး လွေပကေးဇား
အဲဒီမှာ စာသင်နေရင်း မဝါကို စာသင်ကျောင်းရဲ့ ရုံးခန်းထဲကိုခေါ်သွားတာတဲ့။ ပြီးတော့ ကလေးကို သားမယားပြုကျင့်တယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ စာကျက်ခိုင်းထားခဲ့တဲ့ တခြားကျောင်းသားတွေက စာဆိုပြဖို့ ရုံးခန်းကိုရောက်လာတော့ . . .
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ နားဖြန်းကျေးရွာ မူလွန်ကျောင်းတွင်တက်ရောက်သင်ကြားနေသော သတ္တမတန်း ကျောင်းသူနှစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တအာင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (TWO) ၏ အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက် ခံရမှု ပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးမှူး လွေပကေးဇား (Lway A Sandar Win) ကို ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်း ထားပါသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ နားဖြန်းကျေးရွာမှာဖြစ်သွားတဲ့ သတ္တမတန်းကျောင်းသူလေးတွေ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီကလေးငယ်တွေကို ဝန်းရံကူညီပေးနေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အမှုအခြေအနေဖြစ်စဉ်ကို စပြောပြပေးပါဦး။
LASW – နားဖြန်းကျေးရွာက မူလွန်ကျောင်းရတော့ အဲဒီမှာကျောင်းတက်နေတဲ့ ခုနစ်တန်းကျောင်းသူလေးနှစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့် ခံရတာပါ။ စွပ်စွဲခံရသူကတော့ အဲဒီကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးရဲ့ အမျိုးသားပေါ့နော်။ ကလေးတွေပြောကြားချက်အရ သိထား ရတာကတော့ ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကို သုံးကြိမ်အဓ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကလေးတွေပြန်ပြောတဲ့စကားအရဆိုရင် ဒီ ကလေးငယ်နှစ်ယောက် မဝါနဲ့ မဖြူ (အမည်လွဲထား) နှစ်ယောက်ထဲက မဝါကိုကျတော့ ငါးတန်းနှစ်ကတည်းက တစ်ကြိမ် သားမယား ပြုကျင့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါ ၂၀၁၇ တုန်းကပေါ့။ အဲဒီအမျိုးသားက ကလေးတွေကို သင်္ချာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးတယ်။
ချက်ပြုတ်တာ ကူပေးဖို့ဆိုပြီး မဖြူကိုအိမ်မှာလာခေါ်သွားတာတဲ့။ ပြီးတော့ အဲဒီလူက သူ့အိမ်ရောက်တော့ မဖြူကို အဝါရောင်ဆေးပြား တစ်ပြားတိုက်တယ်တဲ့။ ဆေးသောက်ပြီးတော့ မဖြူလည်း အိပ်ပျော် သွားတယ် …
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက သင်ကြတဲ့ငါးတန်းကျောင်းသား ငါးယောက်ရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီမှာ စာသင်နေရင်း မဝါကို စာသင်ကျောင်းရဲ့ ရုံးခန်းထဲကို ခေါ်သွားတာတဲ့။ ပြီးတော့ ကလေးကို သားမယားပြုကျင့်တယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ စာကျက် ခိုင်းထားခဲ့တဲ့ တခြားကျောင်းသားတွေက စာဆိုပြဖို့ ရုံးခန်းကို ရောက်လာတော့ ချက်ချင်း ရပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ ရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေထဲကတချို့လည်း နည်းနည်းပါးပါးတွေ့လိုက်ကြတယ်လို့ မဝါကပြောတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဒီအကြောင်းကို ဘယ်သူ့မှ ပြန်မပြောရဲခဲ့ဘူး။ ပြောရင် ရိုက်မယ်လို့ အဲဒီအမျိုးသားက ခြိမ်းခြောက်ထားတော့ သူအရမ်းကြောက်ပြီး မပြောရဲခဲ့တာတဲ့။ အဲဒီ မဝါ ဆိုတဲ့ ကျောင်းသူလေး ကိုပဲ ဒီလ(စက်တင်ဘာလ) (၁၅) ရက်နေ့မှာ သူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ ကလေးတွေက (၇) တန်းဆိုတော့ ကျူရှင် ယူကြတယ်လေ။ ညနေ (၇) နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ ခေါ်သွားတာလို့ ပြောတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ မဝါကို ရေတိုက်တယ် ပြောတယ်။ ရေသောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ မူးဝေပြီး အိပ်ပျော်သလို မပျော်သလိုဖြစ်လာတယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ အဲဒီ အမျိုးသားက မဝါကို အိပ်ရာထဲခေါ်သွားပြီး သားမယားပြုကျင့်လိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ ပါးစပ်ကိုလည်း ပိတ်ထားတယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ကလေး က အရမ်းလည်းနာကျင်၊ ကြောက်လည်းကြောက်ပြီး ငိုနေခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အကူအညီ တောင်းလို့ မရနိုင်တော့ အရမ်းကြောက် နေခဲ့တာတဲ့။ ပြီးတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောရဘူး၊ ပြောရင် ရိုက်မယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက် ထားခဲ့ တယ်တဲ့။ မဝါတို့က အဲဒီ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး အိမ်မှာ ကျူရှင်တက်နေကြတာဆိုတော့ အဲဒီမှာပဲ အိပ်လိုက်ရတယ်တဲ့။ မူးဝေနေတာတွေ၊ နာကျင်ကြောက်လန့် နေတာတွေနဲ့ ဆိုတော့ သူအိပ်ပျော်သွား ခဲ့တယ်တဲ့။ မနက် (၄) နာရီလောက်မှာ နိုးလာတော့ အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့တာတဲ့။ အဲဒါနဲ့ စက်တင်ဘာ (၁၆) ရက်နေ့မနက်ပေါ့ ၊ အဲဒီနေ့က မိုင်းရယ်ဈေးနေ့ပေါ့နော်။
သူလည်း နာကျင်တာတွေ ဖြစ်နေတယ် ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ အိပ်ရာက ထပြီး အိမ်ပြန် လာခဲ့တာတဲ့။ အဲဒီတုန်းကလည်း တခြားလူတွေကို ပြန်ပြောရင် ရိုက်မယ် …
အဲဒီမနက်မှာ ကလေး က သူ့အမေကိုပြောပြဖို့ကြိုးစားတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် သူ့အမေကလည်း ဈေးထွက်ဖို့ အလုပ်ရှုပ်နေတော့ သူပြောပြဖို့ မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ ညနေ (၄) နာရီလောက်မှာ သူ့အမေ ဈေးက ပြန်လာတော့မှ မေးလို့ သေသေချာချာ ပြောပြ ခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ မဝါရဲ့ အဖေက ဘုန်းကြီး ဝတ်နေတာဆိုတော့ မဝါအမေက ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့သွားတိုင်ပင်တယ်။ အဲဒီ သတင်းလည်း ပျံ့သွားတာပေါ့။ အဲဒီလိုတွေ ပျံ့သွားတော့ မဖြူ က သူ့ကိုလည်း အဲဒီအမျိုးသား က သားမယားပြုကျင့်ခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာကို ပြောပြလာတာ။ ဒီအတိုင်းဆို သူလည်း မပြောရဲဘူးလေ။ သူ့ကိုကျတော့ ဒီနှစ်ကျောင်းစဖွင့်ချိန်လောက်ကပေါ့။ မဖြူက ရက်စွဲ ကို အတိအကျမှတ်မိတယ်။ (၇ . ၆ . ၂၀၁၉) ရက်နေ့ က လို့ပြောတယ်။ အဲဒီနေ့ ညနေပိုင်းက ချက်ပြုတ်တာ ကူပေးဖို့ဆိုပြီး မဖြူ ကို အိမ်မှာ လာခေါ် သွားတာတဲ့။ ပြီးတော့ အဲဒီလူက သူ့အိမ်ရောက်တော့ မဖြူကို အဝါရောင်ဆေးပြား တစ်ပြား တိုက်တယ်တဲ့။ ဆေးသောက်ပြီးတော့ မဖြူလည်း အိပ်ပျော် သွားတယ်ပြောတယ်။ မနက် (၅) နာရီလောက်မှာ နိုးလာတော့ အဲဒီအမျိုးသားရဲ့ ခြင်ထောင်ထဲမှာ ရောက်နေတာတဲ့။ သူ့ဘေးမှာ အဲဒီအမျိုးသားက အိပ်နေတယ်တဲ့။ သူလည်း နာကျင်တာတွေ ဖြစ်နေတယ် ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ အိပ်ရာက ထပြီး အိမ်ပြန် လာခဲ့တာတဲ့။ အဲဒီတုန်းကလည်း တခြားလူတွေကို ပြန်ပြောရင် ရိုက်မယ် ဆိုပြီး သူ့ ဆရာက ခြိမ်းခြောက် ထားတော့ မဖြူလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြရဲ ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အဲဒီ ကျူးလွန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသူကလေးငယ်တွေက တိုင်းရင်းသားတွေလား။
LASW – ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ တအာင်း/ ပလောင် တိုင်းရင်းသားတွေပါ။ တအာင်းနဲ့ ပလောင်က အတူတူပဲလေ။ နားဖြန်းကျေးရွာမှာက ပလောင်တိုင်းရင်းသားတွေပဲအများစုနေကြတာလေ။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုလက်ရှိ ဒီအမှုဖြစ်စဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာက အရေးယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခြေအနေအပေါ် သုံးသပ်ပြောပြပေးပါဦး။
LASW – အခုလက်ရှိကတော့ အမှုတည်ဆောက်ဆဲ ကာလပေါ့နော်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ တွန်းအားပေးရမယ့် အပိုင်းတော့ ရှိတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ရဲဌာနဘက် က ရဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေ လုပ်ဆောင် နေတာပေါ့နော်။ သူတို့က အခု စွပ်စွဲခံရတဲ့ ဦးအောင်မျိုးထက် ကို ရဲစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပြီ။ ပြီးရင် ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေ၊ ကလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေကို ယူနေပြီပေါ့နော်။ နောက် အရေးကြီးတဲ့ သက်သေခံ ပစ္စည်းတွေ ကို လည်း သိမ်းဆည်း ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်တုန်းက အဲဒီအမျိုးသားဝတ်ခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေ၊ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ အဝတ်အစား တွေ ကို လည်း သိမ်းဆည်းပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါတွေကို ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးဖို့ မန္တလေးလား ရန်ကုန်လားတော့မသိဘူး၊ အဲဒီကို စစ်ဆေးဖို့ ပို့တယ်လို့ ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ကလေးနှစ်ယောက် ကို လားရှိုးမှာ Medical Check up လုပ်ပြီး ဆေးစစ်ချက်တွေ ယူပြီးသွားပြီ။ နောက် ရမာန်တွေ ဘာတွေယူပြီး စွပ်စွဲခံရသူကို စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒီလိုတွေတော့ ရှိနေပါပြီ။ ဒီလို ရဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပြီးပြတ်ရင်တော့ ဥပဒေအကြံပေးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ရုံးတော်မှာ တရားစွဲတင်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ မိုင်ရယ်စခန်းမှူးကပြောပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခု ဒီကျောင်းသူလေးနှစ်ယောက်ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုသမှုတွေ ကူညီ နှစ်သိမ့် အားပေးမှုတွေကို ဘယ်လိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသလဲ။ ကလေးတွေရဲ့ အခြေအနေကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
LASW – ကလေးတွေရဲ့အခြေအနေ ဆိုတာထက် သူတို့ရပ်ရွာဒေသမှာ မိဘတွေကလည်း ဒီလိုအမှုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်အရေး တကြီး အလေးထားတာမျိုးတော့ နည်းနည်း အားနည်းတယ်ပေါ့နော်။ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်း လျစ်လျူရှုသလို ဖြစ်နေတာ မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ ဘယ်လိုပြောမလဲ ရွာဘက်တွေမှာဆိုတော့ ဒီမုဒိမ်းမှု ဆိုတာကြီး ကို သိပ်အလေးမထား ကြသလို မျိုး ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့အတွက် ဒါကို အရေးကြီးတဲ့ ပြဿ ာနာတစ်ခုလို သဘော မထားကြဘူးလေ။ ကျွန်မတို့ TWO (Ta’ ang Women’s Organization) အနေနဲ့ ကတော့ ဒီကလေးတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ပေးနေကြပါတယ်။ ကလေးတွေ က ဒီကိစ္စကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်ထိခိုက်ထားတာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတော့၊ အထူးသဖြင့် လောလော လတ်လတ် ကြုံတွေ့ထားရတဲ့ မဝါ (အမည်လွှဲ) က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ထားတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေ ပိုပြီးတွေ့ရ တော့ သူ့ကို နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုတွေ ပိုလုပ်ပေးရတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကို သူတို့ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေကလည်း အားပေး ဝန်းရံပေးနေ ကြပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ ကလေးနှစ်ယောက်လုံးက ကျောင်းတော့တက်နေကြတယ်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ TWO က သူတို့တွေကို ကာကွယ်ဆေးတွေဘာတွေကအစ လိုအပ်တာတွေကို ကူညီပြုစု ပေးဖို့လည်း စီစဉ် ထားပါတယ်။ အခုလာမယ့် ကျောင်းပိတ်ရက်ထဲမှာပဲပေါ့။ ဒီလ (၃၀) ရက်နေ့ဆို ကျွန်မတို့ စပြီပေါ့နော်။ ကျွန်မတို့ ဒီကလေးတွေကို စတွေ့ ကတည်းကနေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး အားပေးမှုတွေ လုပ်လာကြသလို ကလေးတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ အုပ်ထိန်း သူတွေ၊ မိဘတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေကိုလည်း ကလေးတွေကိုအပြစ်မတင်ဖို့ အားပေးဖို့ ကျွန်မတို့က ပြောပြပေးကြတယ်။ သူတို့ ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေကိုလည်း နှစ်သိမ့်အားပေး ဝန်းရံပေးဖို့ အကူအညီတောင်း ပြောပြပေးတယ်။ ကလေးတွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်ခံစားနေရတာတွေတော့ ရှိနေသေးတယ်လေ။ သူတို့ ကျောင်းသွားကြတယ်၊ ကျောင်းက ပြန်လာရင် ထမင်းစားတယ်၊ စကားတွေ ဘာတွေ သိပ်မပြောဘူး အဲလိုပေါ့နော်။ သူတို့ လုပ်စရာ ရှိတာတွေတော့ လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီအရွယ် ပုံမှန် ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရွှင်လန်း တက်ကြွမှုမျိုးတွေတော့ သိပ်မရှိတော့ ဘူးပေါ့နော်။ အဲဒါတွေကို ပြေပျောက်အောင် သူတို့နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအပါအဝင် ကျွန်မတို့အားလုံးက ကူညီနှစ်သိမ့်ပြီး ပျိုးထောင် စောင့်ရှောက် ပေးရ ဦးမှာပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုလို သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိကျင့်သုံးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ ဥပဒေတွေကိုရော တစ်ခုခုမှတ်ချက်ပြုချင်တာမျိုးရှိပါသလား။
LASW – အမျိုးသမီးတွေ အကြမ်းဖက် ခံရမှုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုက အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ အခုလိုသက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေမှာ ကျူးလွန်သူကို တိကျထိရောက်စွာ အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့ စီစဉ် ဆောင်ရတဲ့ အပိုင်းမှာရော၊ ကျူးလွန်ခံလိုက်ရတဲ့ နစ်နာသူကလေးငယ်တွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့် စောင့်ရှောက်တဲ့ အပိုင်းမှာပါ စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ အများကြီးရှိနေဆဲပဲလေ။ ကျွန်မတို့ ဆီမှာ အမျိုးသမီးတွေကို
ကလေးသူငယ်တွေအတွက် လုံခြုံမှုဆိုတာက စိုးရိမ်စရာ ကောင်းနေပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ အပြစ်ပေးခံရသူတွေကလည်း လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်နေကြတာမျိုးတွေရှိတော့ နောက်ထပ်ကျူးလွန်ဖို့ …
အကာအကွယ် ပေးတဲ့ဥပဒေတွေ၊ ကလေးသူငယ်တွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေတွေ စသဖြင့် ကောင်းမွန်တဲ့ ဥပဒေတွေ ကတော့ အများကြီးရှိထားပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဥပဒေတွေကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီး ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်မှု အပိုင်းမှာတော့ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေဆဲပါပဲ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ကလေးငယ်တွေ အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းတစ်ခုကို မဖန်တီးပေးနိုင်သလို ဖြစ်နေရတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေ အတွက် အခွင့်အရေးတွေလို ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံး ပြစ်ဒဏ် စီရင်ချက်ချပြီး အပြစ်ပေးလိုက်ပြီးရင်တောင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဆိုတာကြီးက ဒီလို ကျူးလွန်သူတွေ အတွက် ထွက်ပေါက်တစ်ခု၊ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိနေတော့ နောက်ထပ် ကျူးလွန်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးသလို ဖြစ်နေတဲ့အပြင် ကျူးလွန်ဖို့ ကြံစည်နေသူတွေအတွက်လည်း ပိုပြီးလက်ရဲဇက်ရဲဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်ပြီး အမှုကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာမှာလည်း သတ်မှတ်အချိန်ကာလရှိပေမယ့် မလိုအပ်ဘဲ ကြန့်ကြာနေတတ်တာတွေကလည်း ရှိသေးတယ်။ ဒါတွေဟာ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် ကျူးလွန်ခံရတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေအတွက် အမှန်တရားတစ်ခုကို မျှမျှတတရရှိဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်တာပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မတို့လို အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရော ပြည်သူတွေကပါ ဝန်းရံ တွန်းအားပေး ရတာတွေ ရှိနေရတာပါ။ အထူးသဖြင့် အမှုတည်ဆောက်ဆဲကာလဟာ အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ ဒီကာလမှာပဲ အမှုဟာ ပျောက်ကွယ် သွားနိုင်တယ်။ ရပ်တန့် သွားနိုင်တယ်။ အဲဒါမျိုးပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် အမှုတည်ဆောက်ဆဲ ကာလက ပိုအရေးကြီးတယ်။ ပြီးတော့ တရားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်တော့လည်း တစ်ခါတလေမှာ အမှုတွေက နှောင့်နှေးကြန့်ကြာ သွားတာ တွေ ရှိတယ်။ တစ်ဖက်က ဆင်ခြေအမျိုးမျိုးနဲ့ပြတော့ အမှုတွေက မလိုအပ်ဘဲ ကြန့်ကြာသွားတာတွေ ရှိတတ်တယ်။ သိပ်ပြီးတော့ ထိရောက်မှု မြန်ဆန်မှုမရှိတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒါတွေကတော့ လိုအပ်ချက် အနေနဲ့ ရှိနေသေးတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ပြည်ထဲရေးက ထုတ်ပြန်တဲ့မှုခင်းစာရင်းတွေကို အခြေခံပြီး ကောက်ချက်ပြုထားတဲ့ အချက်အလက် တစ်ချို့ အရဆိုရင် (၁၀) နာရီပြည့်တိုင်းပြည့်တိုင်း ကလေးတစ်ဦးမုဒိမ်းကျင့်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေလည်း ရှိလာတော့ တကယ်ပဲ ဒီ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလား။ အမျိုးသမီး အကြမ်းဖက် ခံရမှု ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်နေသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
LASW – အခုအခြေအနေကတော့ တကယ်ပဲ ကျွန်မတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကလေးငယ်တွေအတွက် စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေမျိုးလို့ ပြောရမှာပေါ့။ အသိပညာပေးမှုတွေလည်း တစ်ဖက်ကဆောက်ရွက်ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။
လိင်အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ မုဒိမ်းမှုတွေကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ပြစ်မှုတစ်ခုလို့တောင် သဘောထား ရကောင်းမှန်း မသိ ကြတော့ အခြေအနေက တော်တော်စိုးရိမ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ပညာရေး …
အခုလို မုဒိမ်းမှုတို့၊ လိင်အကြမ်းဖက်မှုတို့လို ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ Mind Set နဲ့လည်း ဆိုင်သလို တစ်ဖက်က ဥပဒေပိုင်း ဆိုင်ရာ က လည်း ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေ ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ကျွန်မတို့ဆီမှာ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးသူငယ်တွေအတွက် လုံခြုံမှုဆိုတာက စိုးရိမ်စရာ ကောင်းနေပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ အပြစ်ပေးခံရသူတွေ က လည်း လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်နေကြတာမျိုးတွေရှိတော့ နောက်ထပ်ကျူးလွန်ဖို့အတွက်လည်း ဝန်မလေး ကြတော့ သလို ကျူးလွန်ဖို့ ကြံစည်နေသူတွေ အတွက်လည်း တွန်းအားတစ်ခုလို ဖြစ်သွားစေတယ်လေ။ အဲဒီတော့ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ် တွေ အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာဆိုတာ တော်တော်လာပြီ။ မိသားစုထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ မူကြိုကျောင်း၊ အစိုးရစာသင်ကျောင်း စသဖြင့် ပေါ့။ ဘယ်နေရာမဆို ကလေးငယ်တွေအတွက် စိတ်ချလုံခြုံမှုဆိုတာကို ခိုင်ခိုင်မာမာ အာမခံချက်ပေးဖို့ တော်တော်ခက်ခဲ လာနေ တာပေါ့ နော်။ ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ အိမ်ဖော်လိုမျိုးလုပ်နေရတဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ အဲဒီလို ကလေးငယ်တွေ အတွက် ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးနဲ့ လုံခြုံမှုဆိုတာ ဘာမှရေရေရာရာ ရှိမှာမဟုတ်တာ သေချာတာတာပေါ့။
တချို့သော ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုတွေကို သွားပြီး Block ဖြစ်စေတာမျိုးလည်းရှိတယ် …
အခုလို သိရကြားရတဲ့အမှုမျိုးတွေထက် မသိရမကြားရ မတိုင်တမ်းကြတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေက ပိုများနေနိုင်တာပေါ့။ အဲဒီတော့ ခြုံပြောရရင် ဥပဒေအရ ထိရောက်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ အပြစ်ပေးခံရရင်လည်း ခဏနဲ့ပြန်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေ တွေ၊ လိင် အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ Mind Set တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မလုပ်နိုင်ရင်တော့ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – ကလေးငယ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိစေတဲ့ အခုလို သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ၊ လိင် အကြမ်းဖက်မှုတွေများလာခြင်းဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အတွေးအခေါ် ကိုယ့်ကျင့်တရား ရေချိန်နဲ့ ဘယ်လောက်ထိ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ပြောနိုင်မလဲ။
LASW – လူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းတွေကလည်း ဒီလိုရာဇဝတ်မှုတွေ၊ လိင်အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားနှုန်း မြင့်တက် လာခြင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ က ပါ ပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်း မြင့်မားပြီး ဆင်ခြင်တုံ တရား အားကောင်းတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်ပွားနှုန်းက နည်းမှာပဲလေ။ နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် ကလေးငယ်တွေအပေါ် ကိုယ့်ရဲ့ သားရင်းသမီးရင်းလို ကိုယ့် ညီရင်း ညီမရင်းလေးတွေလိုသာ သဘောထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်၊ အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ မျိုးဆက်လေးတွေအဖြစ် အလေးအနက် ထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်၊ အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ နှမရင်း အစ်မရင်းလို မြင်နိုင်သဘောထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အခုလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တာ လျော့နည်းသွားနိုင်တာပေါ့။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မတို့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းတွေ၊ Mind Set တွေဟာ ကောင်းတဲ့ဘက်မှာ အခုထက်ပိုပြီး ခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့တော့ လိုအပ် တာပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက် ထိရောက်တဲ့ ပညာပေးမှုတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။ တချို့ နေရာတွေ မှာဆို ဒီလိုလိင်အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ မုဒိမ်းမှုတွေကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ပြစ်မှုတစ်ခုလို့တောင် သဘောထား ရကောင်းမှန်း မသိ ကြတော့ အခြေအနေက တော်တော်စိုးရိမ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ပညာရေးပိုင်းမှာလည်း Sex Education နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားနည်းချက်တွေရှိနေသေးတာပေါ့နော်။ ဒါကတော့ ကလေးရော လူကြီးရောပေါ့။ လိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှက်စရာ တစ်ခုအဖြစ်ပဲ ရှုမြင်လာကြတဲ့ အခြေအနေက ရိုးရာဓလေ့အစဉ်အလာလို ဖြစ်နေတော့ ကလေးတွေမှာ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အသိတွေ မရနိုင်ကြတော့ဘူ။ အဲဒါရဲ့အကျိုးဆက်က မတော်တဆ လိင်အကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေ၊ လိင်အမြတ်ထုတ်မှုတွေနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ ကာကွယ်နိုင်တာ ကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်တာတွေဘက်မှာ အားနည်းချက်တွေ ဖြစ်သွားတတ်တယ်လေ။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ကျင့်တရား ချို့ယွင်းမှုတွေ၊ လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပညာပေးဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ အားနည်းချက် ရှိတာတွေကြောင့် အခု ကျောင်းသူလေးနှစ်ဦးလို ဆရာနဲ့တပည့်ကြားမှာ၊ တချို့ မိသားစုထဲမှာ၊ တချို့ ဆွေမျိုးရင်းတွေထဲမှာ စသဖြင့် ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေ ဖြစ်လာရတာပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒါဆိုရင် အခုလိုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို တည့်မတ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခု လူ့မှုအသိုက်အဝန်းမှာ ဖြစ်လာစေဖို့ ဘယ်လို အချက်တွေက အရေးပါ ပါသလဲ။
LASW – အဲဒီအတွက်ကတော့ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအရေးကြီးတဲ့ နှစ်ချက်လောက်ကို ပြောရ ရင်တော့ တစ်ခုက ဥပဒေပိုင်းပေါ့။ ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကို ထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေပေးဖို့ လိုအပ်သလို တစ်ဖက် က ကျူးလွန်ဖို့ ကြံစည်နေဆဲအဆင့်က သူတွေကိုလည်း ကျူးလွန်တဲ့အဆင့်ထိ မရောက်လာစေဖို့ Awareness ဖြစ်အောင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းထဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးပြီး Mind Set တွေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက Sex Education ကို ကလေးငယ်တွေက အစ တချို့လူကြီးတွေကိုပါ ထိရောက်တဲ့ သင်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မြင်တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ မုဒိမ်းမှုဖြစ်ပွားမှုတွေ၊ လိင်အကြမ်းဖက်မှုတွေ လျော့နည်းလာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – Sex Education ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါ လက်ရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းကလက်ခံထားတဲ့ ယဉ်ကျေး ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနဲ့ အနှောင့်အယှက် မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
LASW – ဟုတ်တယ်။ အဲဒါ အဓိက အဟန့်အတားပါပဲ။ တချို့သော ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုတွေကို သွားပြီး Block ဖြစ်စေတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ ဒါမျိုးဆိုရင် မကောင်းဘူး။ ကျွန်မ ဆိုလိုတာက ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာတွေကို ဖယ်ရှားရမယ်၊ ပစ်ပယ်ရမယ်လို့ ပြောတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ တချို့သော အစဉ်အလာ ဓလေ့တွေက ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဦးဏှောက်ကို အကန့်အသတ် အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါမျိုးက မကောင်းဘူးလေ။ စောစောကပြောခဲ့သလိုပေါ့ Sex Education ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာဗေဒအတွက်ရော၊ ဇီဝဖြစ်စဉ်အရ ဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲတတ်တဲ့ အခြေအနေတွေအတွက်ရော သိနားလည်ထားဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခု၊ အထောက်အကူပြုတဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် ယဉ်ကျေးမှုအရ မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ ဆရာနဲ့တပည့်ကြားထဲမှာ မပြောရမသင်ရ ဆိုတဲ့အထိ အပြစ်မြင်နေ ကြမယ် ဆိုရင်တော့ ဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်။ အခုဒီမှာက အများအားဖြင့် အဲဒီလိုဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လေ။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခု နားဖြန်းကျေးရွာက ကျောင်းသူလေးနှစ်ယောက်အတွက် TWO (Ta’ ang Women’s Organization) အဖွဲ့ အနေနဲ့ ဘယ်လိုကူညီမှုတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါသလဲ။
LASW – ကျွန်မတို့က ဒီအမှုကို သိရသိရချင်း ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တောက်လျောက် နစ်နာသူ ကလေးငယ် တွေ ဘက်ကို ကူညီမှုတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီအမှုကို ကျေအေးပပျောက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ ရပ်ရွာက တချို့ ကိုလည်း ဒါဟာ ဒီလိုလုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပြတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေကိုလည်း ရှင်းပြဆွေးနွေးတယ်။ နောက် ရဲစခန်းမှာ တိုင်ချက်ဖွင့်တာကနေ ခုအချိန်ထိလည်း အမှုကို စောင့်ကြည့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေကို ဥပဒေဘောင် အတွင်းကနေ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ စခန်းမှူးကိုယ်တိုင်က သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုကို ကိုင်တွယ်တာဆိုတော့ မကြာမကြာ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းဆွေးနွေးတာတွေလည်းရှိတယ်။ ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့် ဆွေးနွေးမှု တွေ အားပေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ အခုလာမယ့် (၃၀) ရက်နေ့မှာ ဒီ ကလေး တွေကို လားရှိုးမှာ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးကုသမှုတွေ လုပ်ပေးသွားဖို့လည်း စီစဉ်ထားပါတယ်။ နောက်တစ်ခု ကျွန်မတို့စီစဉ်ထားတာက ဒီ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးပေါ့။ အခုလက်ရှိကျောင်းမှာက (၇) တန်းအထိပဲ ရှိတယ်လေ။ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့မိဘတွေက စားဝတ် နေရေး သိပ်အဆင်မပြေဘူးလေ။ နောက်ကလေးတစ်ယောက်ကျတော့လည်း မိခင် မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီကလေးနှစ်ယောက် ရှေ့ဆက်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက် တခြား အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပြီး ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုလိုဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Tags: ကျောင်းဆရာ, တရားစီရင်ရေး, တိုင်းရင်းသား, သက်ငယ်မုဒိမ်း
ကျွန်မတို့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး ထိပါးချိုးဖောက်ခံရတယ်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို တစ်ရွာတည်းနေမိသားစုတစ်စုကရိုက်နှက်သဖြင့် နံရိုးနှစ်ချောင်းကျိုး